Indonesia in Focus: Ka dhawrsada Eebe kaliya.
Ka dhawrsada Eebe kaliya.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (371)
(Qaybta saddex boqol iyo toddoba iyo hal), Depok, West Java, Indonnesia, September 16, 2015, 1:29 pm).
Ilaah in uu hadalkiisii ku Quraanka iyo Xadiiska (Sunnah) sheegayaa ninkaas waxa kaliya ee ay u cabsan Dadka Eebe waa kan ku Abuuray Samooyinka iyo Dhulka iyo waxa la abuuray oo dhan.
Human (Mu'miniinta) Allah ayaa sidoo kale ka digay in tiro ka mid ah cadowga Aadanahu waa Ibliiska (Shaydaan) iyo kuwa warwareego oo Gaalada ah.
Laakiin ninkii sameeyey sanamyada jaahilka iyo aadanuhu (Muslimiinta / iimaanka) la amray in ay u sheegaan hanuun ku habboon oo ka mid ah Quraanka iyo Sunnada si ay u toobad keenaan, ha sii sameeyo shirk (la wadaajiyo Eebe Mushrikiin) iyo ka tago isla markiiba Gaalnimo iyo iimaanka xagga Ilaah.
Haddii ay yihiin gaalo oo hawshan samee, warwareego cadowga ku ah Muslimiinta oo la silcin (Dagaalarnay) Muslimiinta, dabcan, Muslimiinta waxaa waajib ku ah in ay is difaacaan iyagoo samaynaya jihaadka fisabilillah (ku Dagaalami Jidka Eebe) sida sameeyey Muhammad Nabiga Badar iyo Uxud.
Haddii aan ma lahayn awood ku filan oo casri ah, dabcan waxaan u leeyihiin in Ilaah ka baryaynaa in aan ku caawino Ilaah, sidii Ilaah ku dagaaladii Badar, Ilaah soo dejiyaa Malaa'igta si ay ula dagaalamaan colka Nabi Muxammed.
Diiwaanka taariikhda, sida Eebe u sheegay in Quraanka, colka Mu'miniinta mar walba Gaalada (dadka ha warwareego) iyo quruun in mar walba dila, oo dili doonaa malaa'igaha Ilaah, laga bilaabo markii ugu Nuux, Muuse (Fircoon iyo ciidankiisii), ee Yuhuudda oo doonayay in ay dilaan Rasul (Nabiga Isa), iyo sidoo kale gaalo kale colaad Muslimiinta. Collaadda Eebe ka dhan baaritaan, haddii aan ka mid ah kuwa u samray, ama dhab ahaantii kaliya ka baqay Ilaah. Iyo baaro haddii aynu walaalaha kuwaas oo hadda ah kuwo Col dizolimi Islaamka caawiyo.
Magaca waa mid aad u yaqaan Aqsa Masaajidka Muslimiinta. Masaajidka, Yeruusaalem waa masjidka saddexaad quduusan dadka muslimiinta ah, ka dib markii masaajidka Grand ee Mecca iyo Nabiga Masjidka magaalada Madiina.
Inta badan Muslimiinta ayaa sidoo kale mar walba loo yaqaan mar ahaa salaadda masaajidka Mecca hore. Booska cusub ee lagu bedelay Kacbada Masaajidka Grand ee 17-ka ka dib markii uu Nabiga u soo haajiray Mecca in Madiina.
Sheekadu waxay ugu caansan ee masaajidka waxaase laga yaabaa in arrin Isra 'iyo Mi'raj ee sanadkii 620. masaajidka Aqsa ayaa waxaa lagu magacaabaa Isra Nabiga noqday safar final ka Haram ah. Laga soo bilaabo meeshan sidoo kale Nabiga bilaabay socdaalka si Sidrat Al Muntaha ama safayr samada toddoba.
By waqtiga habeenkii ee Isra 'iyo Mi'raj, sidoo kale, masaajidka waxaa sidoo kale loo yaqaan magaca Baitul Maqdis la rumeysan yahay inuu meesha ka mid ah baryadii Nabiga sida imam in shirka wada 25 rasuullada iyo nebiyada ka badan 160,000.
Aqsa Masjidka ayaa sidoo kale waxay caan ku tahay taagan dhismaha Reebay saddex diimaha, Islam, kiristaanka iyo Yuhuudda. In ay taariikhda, masaajidka ahaa mar gacanta ku awoodaha weyn, ka Roman, Byzantine, ilaa Islam.
Aqsa Masaajidka, taasina waa mid aad si dhow ula Muslimiinta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro ka mid ah xaqiiqooyinka si ballaaran lama yaqaan oo arrintan ku saabsan masjidka qadariyo.
Masaajidda badan oo
Magaca Al Aqsa markii hore si uu u tilmaamo goobta oo ku yaalla qaybta bari ee Palestine adeegsaday. Dhab ahaantii, masaajidka Aqsa ee ma aha masjidka kaliya on goobta. Si looga hortago wareer, dhismaha taariikhi ah waxaa loo yaqaan magaca alias Al Haram Asyarif dal qurxoon oo quduuska ah.
Aqsa Masaajidka ma aha masjidka kaliya ee adag this. Masaajidada ayaa sidoo kale si dhow u la xidhiidha taariikhda Islaamka. Intaa waxaa dheer Aqsa Masaajidka waxaa jira Muslimiinta Qiblay Qaabilijireen Masaajidka, alias Masjid Al Sakhra wadini of Rock, Burqa Masaajidka, Masjid Marwani, iyo kuwo kale.
The qalad ugu badan waxay dhacdaa marka arkaysid sawir Masaajidka wadini of Rock ah. Dad badan oo ka fikirayn oo masaajidka ku yaal Masjidka Aqsa ah. Halka masaajidka Aqsa iyo wadini of Rock waa kala duwan wadajir.
Wadini of Rock waxay leedahay Xamar dahab ah. Waxaa la sheegay in qubbad waxaa taas dahaarka leh kula dahab. Masaajidka sidoo kale waa mid ka mid ah ragga calanka u Yeruusaalem. Dad badan ayaa ka fiirsan dhismahan Aqsa Masjidka. Dhab ahaantii, marka baaritaan dhex Google Aqsa Masaajidka, sawirka adag in soobixi waa sawir ah masjidka Al Sakhra la cajiib Xamar.
Aqsa Masjidka waxaa ku yaalla koonfurta Masjid Al Sakhra. Dhererkii dhismihii ku saabsan 83 mitir. Balladhka 56 mitir. About 5,000 oo qof ay awoodaan in la tixgeliyaa masaajidka this. Haddii la degaanka ku hareereysan, oo daboolaya qiyaastii 144,000 mitir murabac oo ay weheliso. Shuban 400,000 caabudilahaa.
Aqsa Masjidka Xamar madow, sababtoo ah waxaa laga sameeyey oo qasacad. Masjidka waxaa la dhisay xeerkii Nebi 40 sano ka dib Kacbada.
Waxaa jiray diiwaan gelin sida nebiyada oo waxaa lagu aasay meeshan. Laakiin si cad, Nebiyo iyo Asaxaabtii Nabi Muxammed, sida Salman Farsi, halkan waxaa lagu aasay badan.
Nabiga Sulaymaan wuxuu noqday mid ka mid ah la rumeysan yahay inay ku dhinteen ku dhawaad masaajidka Aqsa ee. Qabrigiisa waxaa si xoogan looga shakisan yahay in aan halkan si kastaba.
(BBC) - Dagaal u dhexeeya dibad Falastiiniyiinta iyo Israel booliska ee xarunta masjidka Al-Aqsa ee Yeruusaalem galay maalintii saddexaad, Tuesday, September 15th.
Banaan tuuray dhagaxyada, rashka, oo gogo 'oo la taaban karo, oo ka ilimaysiisa ee ciidamada ammaanka Israel, saraakiisha booliska ayaa sheegay in Israa'iil.
Waxa uu sheegay in laba Falastiin ayaa la qabtay iyo shan askari oo bilays ah soo gaaray dhaawac fudud.
Xaaladda waxaa looga guulaysan karaa wax yar ka dib iyo adag Al-Aqsa dib loo furey si ay u soo booqda.
Al-Aqsa Masaajidka oo micnaheedu noqday daahir labada by Muslimiinta ama Yuhuud inta badan goobta ka xiisadda u dhaxaysa binu Israa'iil iyo reer Falastiin.
Israa'iil in ay u ogolaadaan in ay booqdaan Yuhuudda adag masaajidka, oo Falastiin arkaa daandaansi ah.
Qaramada Midoobay iyo dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqay labada dhinac in ay ka joogso.
Dalalka deriska la Israa'iil iyo Falastiin, Urdun, ayaa ka digay in Israa'iil waa inay soo celiyaan xasiloonida ee Masjidka Al-Aqsa iyo dhulka ku hareeraysan.
Hadii uusan xaaladan oo khatar lahaa xidhiidhka ka dhexeeya Israa'iil iyo dawladda ee Amman.
"Cadhaysiiyey nooc kasta oo Yeruusaalem saameyn ku yeelan doonin xiriirka Israeli-Jordan. Urdun lahayn doorasho kale, laakiin in ay qaataan talaabo adag," ayuu yiri King Abdullah of Urdun.
Urdun saxiixay heshiis nabdeen reer binu Israa'iil ah ayaa masuul ka ah dhammaan dhinacyada Islaamka ee xarunta Al-Aqsa.
Dagaal ka qarxay gudaha masaajidka al-Aqsa ee Yeruusaalem Bariga, booliska Israel galay xarunta, kadib markii masaajidka.
Warbaahinta Israel sheegay, Ynet News, daraasiin ciidanka bilayska galay gobolka, soo dhaweeyay Falastiin dhagxan iyo risaasta.
Isku dhacyo la mid ah ka dhacay dabayaaqadii July.
Gobolka xurmada saddex diimaha waa il xiisadaha siyaasadda iyo diinta u dhexeeya Falastiin iyo Israel, oo inta badan keentay in colaad.
Xiisada mar kale soo baxay laba toddobaad ka hor, ka dib markii fal Wasiirka Gaashaandhiga Israel, Moshe Yaalon ayaa mamnuucay Labo urur Islaami ah taaso galo kooxda martida Yuhuudda xerayaha Haram al-Sharif in sidoo kale sheegtay Yuhuudda.
The dagaalladii ugu dambeeyay ay ka dhaceen saacado ka hor xafladda Yuhuudda sanadka cusub, Tubalow Hashanah, taas oo ka bilaabanayso qorrax markii Sunday (13/9) ilaa habeenkii talaadada.
Cabsi ugu SWT ahu iyo saamaynta nolosha Muslim ah
Dhaqanka ee wadnaha, arrin weyn iyo ammaan badan. Merit iyo dembi waa ka weyn yahay falimaha addimada, sababta oo ah dhaqdhaqaaqa addimada xaqa raaci qalbigaaga. Sidaa darteed, waxa uu ku sheegay, "waa qalbiga taliye u ahaa waaxyo iyo xubnaha kale ee jirka waa rag."
Waxaa ka mid ah dhaqanka ee qalbiga ku dhiira galinaynaa khayrka, iyo in kobcin karaan dareen jacayl ilaa ugu dambaysta, taas oo la fogeeyay karaa camal xun oo keeni kara in ay habdhaqanka qaribaadii dhinaca adduunka iyo xakameeyo kara damaca waa Khauf (cabsi) iyo boqorka '(rajo) Eebe Ilaaha Qaadirka ah.
Khauf (cabsi) in Alle hanuunin doonaa qalbi ah u barwaaqaysan oo dhan oo isaga looga hortago xumaato oo dhan, halka boqorka 'eryay isaga ku guuleysto ahaanshaha iyo abaal marin Eebe Ilaaha Qaadirka ah, oo neefsada hamiday in Camal weyn.
Cabsida Ilaahay waa waax ka mid ah tawxiid waa in laga sooco oo kaliya in Ilaahay. Allah Subhanahu wa imtithaal amray in ninkii isaga ka cabsada oo mamnuucayo cabsi Eebe ka sokow. Ilaahay wuxuu leeyahay,
Run ahaantii, ma aha waxaan cabsi ah kan Ibliiska (aad) la saaxiibbadiisa (kuwa sanamka caabuda ee Quraysh), sidaas darteed ha ka cabsanina, ee iga Cabsada, haddii aad xaqiiqdii tahay Mu'miniinta [Ali waxay ahaayeen Imran / 3: 175]
Sidaa darteed ha ka baqin in ay aadanuhu, (laakiin) ee iga Dhawrsada. Hana ku Gadanina Aayaadkayga Lacag la qiimo yar. [Al-Maidah / 5: 44]
Maxaa loola jeedaa cabsi yihiin: walaaca, niyad-jab, iyo walwalsan cadaab bandhigi Eebe Ilaaha Qaadirka ah iyada oo sababtu tahay falal sharci darro ah ama ka tegid waajibaadka, ayaa sidoo kale ka welwelsan in Eebe Subhanahu wa imtithaal ma helin dhaqanka shalihnya. Iyadoo cabsi this, qofkaasu waa ka beenineyso doonaa waxyaalaha reebay yaaceen in wanaag la falo.
Qofka cabsi sida kor ku xusan, waxaa loo ballan qaaday abaal marin Alle waa weyn ee aayado badan. Ka mid ah hadalka Eebe Ilaaha Qaadirka ah:
Dadka ayaa ka cabsanaya in Eebe ka heli doonaan laba janno. Rabb aad markaas janjeero oo mid aad diidi? Labada samada in uu leeyahay dhirta iyo midhaha [ar-Rahman / 55: 46-48]
Ilaahay inuu wax ku wacdiyo in kuwa isaga ka cabsada, waa badbaadi doonaa waxyaalaha uusan jeclaan, la siiyo filaanshaha iyo siiyey dhamaad fiican.
Haddii aynu ka baran nolosha culimada ee Salafkii, waxaan ka heli cabsida Alle ayaa heysatay quluubtooda. Tani waxay ku dhiiri gelinayaa in ay sii wadaan si ay kor ugu dhaqanka iyo fadliga Eebe ee Ilaaha Qaadirka ah ka filan. Sidaa darteed, xaaladaha noloshooda ayaa mar walba wanaagsan, waxay kale yihiin dhamaadka wanaagsan nolosha iyo sidoo kale ku dhaqmaan barako buuxa.
Cabsi mahadsan waa cabsida keena in camal wanaagsan, xanibeen falal sharci darro ah. Haddii cabsi in uu dhaafo xadka in, waxaa ka dhigi doonaa kuwo Quusan dabiiciga ah ee naxariista Eebe Ilaaha Qaadirka ah.
Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah yiri, "Heerarka cabsi waa in ay leeyihiin addoon yahay xajmiga cabsi ah in la riixay karo la sameeyo wax fardhu oo ka fog Reebay. Haddii in ka badan heer ka sarreeya si ay u naf dareen inay sameeyaan nafilah (dhaqanka gudniinka) iyo adeecid kicin kara, iska ilaali makruh ah, oo aan xad-dhaafka ah ee wax la ogolaan karo, ka dibna waxa ay dhan Samo falku inaad ah ammaan mudan. Laakiin haddii cabsida u badan wax ka sarreeya waxay keeni kartaa cudur, dhimasho ama walaac joogto ah in la jaray dhammaan noocyada ganacsiga, markaas cabsidaa ma aha ammaan. "
Cabsi Taasi waa in la iska leh Muslim ah halka nool iyada Noloshanada Adduunyo ahayn. Oo weliba wixii boqorku ku saabsan?
Markaasaa boqorkii wuxuu ku 'waa hamiga si loo gaaro Abaal marinta Eebaa soo camalka wanaagsan buu ku dhex sameeyey. Sidaas daraaddeed boqorkii shuruudda 'sameynayo camalka wanaagsan, ka tago waxyaabaha la Xarrimay ama toobad waxaa ka mid ah. Sida ugu tagay waajib ku ah, inuu adeeco waxay doonayaan, oo u Dhawyahay inuu Alle, markaas ma aha boqorka 'laakiin kaliya dareemay ammaan ka khiyaamo qaran Eebe Ilaaha Qaadirka ah, halka Alle yidhi:
Ma waxay ka aamin Cadaabka Eebe (lama filaan ah)? Waxaa aan ka aamin Eebe mooyee khiyaamo qaran oranag khasaaray [al-A'raf / 7: 99]
Alle, in boqorka 'waxaa jiray ka gaareen camalka wanaagsan, oo aan camal fiican, boqorka' aan jirin. Ilaahay wuxuu leeyahay,
Indeed, kuwa Akhriya Kitaabka Eebe, oog Salaadda, bixiyana waxa waxaan ku arzaaqay qarsoodi ah ama Caddaan, oo ay tahay kuwa filaya ganacsi aan damayn. [Fatir / 35: 29]
Sida xaqiiqada ah kuwa rumeeyey xaqa, kuwa Hijrooday oo ku jahaaday jidka Eebe, iyagu waa kuwa filan fadliga Eebe ee korkiina, Eebana waa dambi dhaafe naxariista. [Al-Baqarah / 2: 218]
Raja 'iyo sidoo kale al-Khauf waa wadnaha cibaadada waa in aan la iska soo jeestay in aan ka ahayn Ilaahay. haddii ay jiraan memalingkannya in aan ka ahayn Ilaahay, ka dibna uu ku dhacay balli ah oo shirk.
Markaasaa boqorkii 'waa xarunta ugu dhow inay soo dhaamiso u dhaw in ay Alle. In xadiis Qudsi sharaxay in Alle yidhi:
Waxaan ahay sidii addoonkaygii eedeeyay igu. Oo waxaan isaga la joogay markuu xusa in aan
Waa kuwee la sameeyo waa in ay Muslim ah waa in la isu geeyo Inter Khauf iyo boqorka '. Labada lagu miisaamay. Taasi waa xaalad ka mid ah Nabiga iyo Rasuulkiisa iyo Muslimiinta. Ilaahay wuxuu leeyahay,
Hull ay ka fog yihiin sariirta oo ay had iyo goorna Eebihiis Eebe Cabsi iyo Doonidba, oo ay ku qaataan bixinta in aan bixino. [As-Sajadah / 32: 16]
Marka Muslim ah waa ogyahay nimco caymiska Eebe Ilaaha Qaadirka ah, deeqsinimada isaga, isaga sahal galay siiyo dambi dhaaf in dembiyadoodu waa weyn, ballaadhkiisuna wuxuu ahaa oo uu samada iyo qadarka abaalmarinta samafal shalihnya, naftiisa ka dhici dona, deji, oo uu sii wadi doonaa in si joogto ah rajo iyo hami si loo gaaro waxa uu jiro Alle ka sokow. Halkii, markii uu arkay sida culus Cadaabka Eebe, aad u adag saxariiriso, xisaabinta waxay ahaayeen si fiiro dheer, Maalinta Qiyaame iyo Naarta Jahannamana waxay si aad u xun, iyo sidoo kale cadaab kala duwan ee Aakhiro, markaas naftiisa waa laga hortagi doono, xadidneyn, mar walba ay feejignaadaan oo ay cabsi u xadgudub.
By maxaa yeelay waxa ay, ku Xadiiska Abuu Hureyrah Radi anhu, Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
Ka soo qaad Mu'min ah ogaan cadaab dhinaca Eebe, hubaal jirin mid noqon doono mid aad u hami in ay uu gaaro janno. Oo haddii gaalada ogaan u naxariisan Eebe, hubaal mid ma uu doonaynin ka quusanina uu gaari samada
Buugga Madârijus Salikin, rahimahullah Imam Ibn al-Qayyim yiri, "Waayo, qalbiga (nin) inuu u dhaqaaqo Alle waa sida shimbir, taas oo ah jacayl Eebe sida madaxa, halka al-Khauf (cabsi) iyo boqorka 'waa laba baal. Haddii madaxa iyo laba baal oo caafimaad qaba, wuxuu u soo duuli doonaa wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay madaxa ka dibna lumin lahaa, wuxuu ku dhiman, iyo haddii uu badiyay labada baal ka dibna uu ku dhici doonaan dabinka ugaadhsadaha ama Galaydhka. "
Alle na siiyo iyo dhammaan Muslimiinta dareenka waxa aan u baahanahay in nolosha dhabta ah in dadka dunida jooga waxaa ka buuxa xagga dulanka.
al-Khauf, kuwaas oo cabsi cadhada iyo ciqaabta Eebe Ilaaha Qaadirka ah. Ka fikir waxa waa in la xoojiyaa inagu dhex jira, marka aynu nahay ee xaalad caafimaad. Gaar ahaan tani waxay ka qabno, taas oo dunida joogta ku khiyaanayn dadka intooda badan la qurux been ah, iyaga oo keenaya in la dayacay ee dhikrullah in ugu dambeyntii keentay in Quluubtooda mid Ingagan, noqday, mid dhib badan buur dhagax ah, in kastoo. Na'udzubillah.
Laakiin boqorkii 'rajo ie ama hamiga si loo gaaro Abaal marinta Eebaa Ilaaha Qaadirka ah ayaa sidoo kale ballan qaaday in aan ka baabi'i qalbigayaga, in aan ka quusanina naxariista Eebe Ilaaha Qaadirka ah ma samayn.
al-Khauf u baahan yahay Muslim ah si ay u Deg degi wax loo fuliyo xuquuqda Ilaahay isaga ilaaliyo dayaca. Dhadhan ayaa sidoo kale waxaa looga hortegi doonaa ka qabanayaan dadka kale menzhalimi iyo dhiiri inuu aamin ahaado, daacad ah, cadaalad ah oo aan lumin xuquuqda dadka kale.
Sidoo kale cabsan gundhig ah oo qalbigoodu isaga badbaadin doonaa khiyaano dunida, sidaasi darteed waxa uu ahaa ma iska maydhay damaca waana laga Reebay, maxaa yeelay, isagu had iyo jeer waa heegan dunida.
Ya Allah! Na Anugerahkanlah cabsi na caqabad ka falal akhlaaqda; Anugerahkanlah in ay naga addeecsan na waxay keeni kartaa in ay samada; Iyo anugerahkanlah si kalsooni ah oo aan dareemeyno masiibooyinka dunida iftiinka waxaa laga yaabaa.
(Waxaa laga soo khudbada Jimcaha ee Masjidin Nabawi dhiibay hafizhahullah Sheikh Dr. Ali al-Hudzaifi on 8 Shafar 1434 la horyaalka ee al-Khaufu wa minallah fi Hayâtil Atsaruhu Muslim)
[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 11 / Year XVII / 1435H / 2014M ah. Publishers Guddiga Joogtada Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57 183 Tel. 0271-858197 Fax 0271-858196]
Posted by needsjobslowongankerja at 6:41 PM